Milk Of Magnesia Suspension – Online Myanmar Pharmacy
Milk Of Magnesia Suspension - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
MOM ( Milk of Magnesia ) "
ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း၊ လေပွခြင်း နှင့် အစာမကြေပျို့အန်ခြင်းများ။
အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ခြင်း နှင့် အစာအိမ်နာ၊ အူနာများကြောင့် နာတာရှည်ဝမ်းချုပ်ခြင်း နှင့် တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပေါ်တတ်သော ဝမ်းချုပ်ခြင်းများအတွက် " MOM ( Milk of Magnesia ) ဝမ်းမှန်ဆေးရည် ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
လူကြီး - ၂ဇွန်း မှ ၆ဇွန်း အထိ သောက်သုံးပြီးနောက် ရေတစ်ဖန်ခွက်သောက်သုံးပါ။
ကလေး - ၁ဇွန်း မှ ၃ဇွန်း အထိ ရေနှင့်အတူသောက်သုံးပါ ( သို့ ) ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းသောက်သုံးပါ။
လူကြီး - ၁ဇွန်း မှ ၃ဇွန်း အထိ တစ်နေ့လျှင် ၃ကြိမ် မှ ၄ကြိမ် အထိသောက်သုံးပါ။
ကလေး - ဇွန်းဝက် မှ ၁ဇွန်း အထိ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
Constipation, heart-burn, gas and nausea.
Acute & chronic constipation due to hyperacidity and peptic ulcer.